Iimvithamini zibandakanyeka kwiinkqubo ezininzi zezinto eziphilayo, ngoko ke, ukungabikho kwabo kubangela ukuphazamiseka kwazo zonke izitho kunye neenkqubo, enye yeembonakalo ezinjalo iyancipha kwi-hemoglobin egazini, ukukhusela umzimba. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukutya ukutya okunokulinganisela, kunye nokongeza iivithamini ezivela ngaphandle, ngakumbi ngexesha loxinzelelo emzimbeni (umzekelo, ukukhulelwa) kunye nakwixesha le-vitamin yokuntuleka kokutya.
Ukungabikho kwesinyithi emzimbeni, kwaye ngenxa yoko, i-hemoglobin ephantsi, kunokukhokelela ekuphuculeni kwempilo yakho, kuba i-hemoglobin inceda ukudlulisa i-oksijini kuwo onke amaseli omzimba womntu. Ukuba unesifo esiqhoqhoqhobala, uzive unobuthakathaka obuninzi, ukukhathala okukhawuleza, ukunyanzelwa kweenweya zakho, iinwele ziwa ngaphandle, okanye izandla zakho neenyawo zinyuka, ngoko mhlawumbi isizathu sokuba yonke into i-hemoglobin ephantsi.
IiVithamini ukwandisa i-hemoglobin - ezi iivithamini eziqulethe i-iron, kodwa kungekhona nje kuphela, ngenxa yokuba isinyithi kufuneka ihambelane, kubalulekile ukuba uthathe inxaxheba kwezinye iivithamini kunye nokulandelela izinto. I-Vitamin C iyintsebenziswano ethembekileyo kwi-assimilation yensimbi ngomzimba. Ukuba uthatha amalungiselelo ensimbi, kubalulekile ukubandakanya i-vitamin B 12 ekudleni kwakho. Ukongezelela, umzimba wethu udinga i-vitamin B 6 , ukwenzela ukuba i-hemoglobin iyimida eqhelekileyo. Ukuntuleka kwale vithamini kunokukhokelela ekunciphiseni ukukhuseleka nokukhulelwa kwegazi. I-Vitamin B 5 okanye elinye igama-i-pantothenic acid, iphucula izinga le-hemoglobin egazini kwaye liqinisa ukukhuselwa komzimba wonke.
Njengoko ubona, iivithamini ze-hemoglobin nazo iivithamini zokukhusela "kumntu omnye". Ngokuqinisekileyo, unokuthenga isixhobo semvelaphi ye-pharmacological kwaye uyisebenzise ukuphucula umzimba, kodwa kubalulekile ukulungiselela ukutya okupheleleyo kunye nokulinganisela, kuba iivithamini zemvelaphi engokwemvelo zisebenza kakuhle, zingcono zithathwa ngumzimba. Ukuba ukutya kwakho akukona ubukhulu obuphezulu, kubandakanya ekudleni kwakho kwezondlo zokutya eziphezulu eziqulethe izidakamizwa zemvelo kwaye ngokuqhelekileyo zongeza umzimba wakho kunye nezondlo ezingekhoyo.
Kubalulekile ukwazi ukuba amanqanaba aphantsi esinyithi emzimbeni womntu ayisoloko yimbangela enkulu yokukhuseleka komzimba. Ngoko ke, de ufike kwi-hemoglobin eqhelekileyo egazini, akukho mqondo ukwandisa umzimba.
Ngoko, yintoni ukutya ofuna ukuyisebenzisa ukunyusa izinga le-hemoglobin? Isibindi, amaqabunga, imifuno eluhlaza kunye namaqanda ziqukethe ininzi eninzi kunye nevithamini B 12 . Njengoko sele kuthethwe ngaye, kufuneka uzalise umzimba nge-vitamin C, ekhuthaza ukutyunjwa okuqhelekileyo kwintsimbi, kunye nokukhuthaza ukukhusela umzimba. Uninzi lwevithamini C lufumaneka kwi-citrus, pepper sweet, kiwi, strawberries, broccoli, oranges. I-Vitamin C yinto ebalulekileyo ye-antioxidant ekhusela umzimba ekungcoliseni i-chemical and toxins. I-Vitamin B 6 ifumaneka kuma-porridges, i-meat kunye neentlanzi, iimbotyi, ukutya kunye nemifuno.
Ukuba izinga le-hemoglobin liphantsi kakhulu okanye ukutya okusemgangathweni okungenakukwazi ukumisela izinga le-hemoglobin, okubangelwa kukuntula kwintsholongwane ye-anemia, amalungiselelo e-pharmacological anesitishi kunye namavithamini akhuthaza ukusetyenziswa kwawo. Imizekelo yezidakamizwa yi-Anaferon, i-Sorbifer Durules, iiFenyul kunye nabanye. Ezi zonyango kufuneka zithathwe kuphela njengoko zilawulwa ngugqirha kwaye emva kophando oluya kunceda ukucacisa imbangela yokunciphisa i-hemoglobin egazini.
Kukho iindlela ezininzi zokupheka, ezibonakaliswe kakuhle kunyango lwezifo. Ngokomzekelo, isanqante efanayo nekhilimu omuncu okanye umxube wezithelo ezomileyo, i-nut, inyosi kunye nejisi lemon.
Kubalulekile ukwazi ukuba ukukhuselwa kwezifo kuhlala kuncinci. Ngenxa yoko, ukutya okupheleleyo okucebile kwiivithamini kunceda ukugcina i-hemoglobin ngaphakathi kwemida eqhelekileyo, ngoko ke kuqinisa ukukhuselwa komzimba wonke. Ungayihoyi ulala oluhle, uhamba ngaphandle kunye ne-gymnastics yemihla ngemihla - amaqabane athembekileyo omzimba okhuselekileyo. Jonga impilo yakho, sigqibo ngexesha lokungaphumeleli kwintsebenzo yezitho kwaye uyidle ngokupheleleyo, kwaye umzimba wakho uza kusebenza njengama-clockwork.
Ziziphi iivithamini ezifunekayo kumfazi
Ukuhlaziywa: iintlobo kunye nendlela eyenziwa ngayo
Umntwana wayetyhefu ngesityalo esinetyhefu
Yintoni abantu abaye bacinge ngayo ngabafazi abathandekayo
Ingqondo yengane - impembelelo yombala kwi-psychology yengane
U-Evelina Khromchenko wacebisa "amabutho anesibindi" ukusebenza
Ukuphuhliswa kwabantwana ezinyangeni ezili-11: yintoni enokukwazi ukuyenza
Gcina umlo emva kokuphela kokutya
Ingqondo yengqondo ngokuphathelele inkosikazi yakhe
Yintoni okufuneka uyidle kwaye uyenze ukuze ubelethe intombi
Ummeli u-Olga Zaitseva. Wakhe msebenzi
I-Funny ne-fussy chastushki ngoFebruwari 23